शरिरको कुनै भाग काटेमा के गर्ने ? - Varient - News Magazine
Jul 20, 2021 - 12:44
काट्नु भनेको चोटपटकको सामान्य प्रकार हो र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनको केही समयमा सानो वा ठूलो काटेको घाउको अनुभव गर्दछ। तपाईं दैनिक काम गर्दा कुनै पनि चीजले काट्न सक्छ।
यस लेखले काट्नु भनेको के हो, काट्दा के गर्ने, काट्दा के गर्नु हुँदैन, काट्दा कति बेला डाक्टरकहाँ जाने भनेर वणर्न गरिएको छ।
काट्नु भनेको के हो?
छालाको सतहको असरलाई कट अफ भनिन्छ। दुबै काट्नु र छिल्नु ले छालाको सतहमा असर पुर्‍याउँछ, तर काट्नु भनेको छालाको भित्री सतहसम्म असर पुग्नु हो, जबकि छिल्नु भनेको छालाको भित्री सतहहरूलाई असर नगरि बाहीर रुपमा असर पर्नु हो।
तपाईले दैनिक काम गर्दा कुनै पनि चीज वा बस्तुले काट्न सक्छ, जस्तो भान्छाकोठामा काम गर्दा सानो लापरवाहीले तपाईंको औंला, घुँडा र कुहिनो काटीन सक्छ।
तपाईको शरीरमा हुने कुनै पनि किसिमको क्षतिलाई चोटपटक भनिन्छ। दुर्घटना र कुनै पनि प्रकारको उत्पीडन, लडाई वा झगडाले तपाईंलाई घर, अफिस वा खेलको समयमा चोट पुर्याउन सक्छ। न्यूक्ली वा शरीरमा प्रवेश गर्ने वस्तुहरूले तपाईंलाई चोट पुर्याउन सक्छ।
यदि तपाईं वा अरू कसैको छाला काटिएको छ भने, प्राथमिक उपचार निम्न तरिकाले दिन सकिन्छ।
पहिले आफ्नो हात धुनुहोस्। यसले संक्रमणको जोखिम कम गर्दछ।
काटिएको घाउलाई पानीले धुनुहोस्। साबुनले घाउलाई पोल्न र चिलाउँन सक्छ, त्यसैले घाउमा सिधै साबुन नलगाउनुहोस्।
यदि घाउँ धुइसके पछि पनि घाउमा धूलो वा फोहोर बाँकी छ भने, सानो चिम्टाको सहायताले यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस् र यदि तपाईं यसो गर्न सक्नुहुन्न भने, डाक्टरकोमा जानुहोस्। घाउ राम्ररी धुँदा टिटानसको जोखिम कम हुन्छ।
घाउँलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइडले सफा नगर्नुहोस्। यसलाई सिधा घाउमा नराख्नुहोस्।
सानो कटौतीको कारण रक्तस्राव स्वतः रोकिन्छ, तर यदि रक्तस्राव रोकिदैन भने, घाउमा कपडा राखेर बिस्तारै दबाब दिनुहोस्।
यदि घाउँ हात वा खुट्टामा छ भने, रक्तस्राव कम गर्न यसलाई तपाईंको हृदयको स्तरभन्दा माथि राख्नुहोस्।
घाउ सफा गरेपछि यसमा एन्टिबायोटिक क्रीम लगाउनुहोस् जसले गर्दा घाउँ ओसिलो रहन्छ। तपाईं यसको लागि पेट्रोलियम जेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै क्रीमले घाउमा दागहरू निम्त्याउन सक्छ, त्यसकारण अधिक क्रीम प्रयोग गर्न रोक्नुहोस्।
काटिएको छालालाई पट्टी वा ब्यान्डेजले कभर गर्नुहोस्।
यदि काटिएको घाउ गहिरो छ भने, डाक्टरकोमा गई टाँका लगाउनुहोस्।
पट्टी दैनिक बदल्नुहोस्। यदि पट्टी फोहोर भएको छ भने, समय समयमा बदल्नुहोस्। पट्टी वा ब्यान्डेजहरु सजिलै मेडिकल स्टोरहरूमा पाउँन सकिन्छ।
प्रथमिक उपचार पछि फेरि आफ्ना हातहरू धुनुहोस् र पट्टी परिवर्तन गर्नु अघि प्रत्येक पटक आफ्ना हातहरू सफा गर्नुहोस्।
यदि पहिल्यै तपाईलाई टिटानसको इंजेक्सन दिइएको छैन भने, डाक्टरकोमा जानुहोस् र यसको खोप लगाउनुहोस्।
यदि तपाईं माथिको संक्रमणका लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरमा जानुहोस्।
डाक्टरको मा कति बेला जाने?
यदि काटेको घाउँ गहिरो छ।
यदि तपाईंलाई काटेको कारण ज्वरो आएको छ।
यदि घाउँ व्यक्तिको अनुहारमा छ भने।
यदि आँखाको नजीक काटेको छ।
यदि तपाई घाउको वरिपरि रातो, चिलाउने,पोल्ने आदि भएमा।
यदि घाउमा फोहोर वा अन्य कणहरू निस्किएको छैन्।
यदि काटिएको घाउँ पशु वा व्यक्तिले टोकेको कारणले भएको हो।
यदि काटिएको वरपरको छाला सुन्नीएको छ भने।
यदि तपाईर्ला सुगर छ भने।
यदि तपाईंसँग पछिल्ला १० बर्षसम्म पनि टिटेनस ईन्जेक्शन लिनु भएको छैन भने।
यदि घाउँ गहिरो छ र तपाईले बितेको ५ बर्षमा टिटानस इन्जेक्सन लिनु भएको छैन।
यदि तपाईंको छाला काटिएको छ वा घाउँ भयो भने, निम्न चीजहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस् ।
घाउ खुला नछोड्नुहोस्, यसले संक्रमणको जोखिम बढाउँछ।
घावलाई हाइड्रोजन पेरोक्साइडले सफा नगर्नुहोस्, यसले छालाको तन्तुलाई क्षति पुर्‍याउँछ र घाउ चाँडै निको हुँदैन।
घाउलाई सुख्खा नराख्नुहोस्, यसमा मोइश्चराइजर लगाउनुहोस्, ताकि घाउ चाँडै निको हुनेछ।
ब्यान्डेज वा पट्टी सिधै जोडले नतान्नुहोस यसो गर्दा घाउको खुर्की बाहिर आउन सक्छ र घाउ फेरि खुल्न सक्छ।
घाउमा रक्सी नलगाउनुहोस्।